Gacmo -gashiga PE -ga la tuuro TPE galoofyada la tuuri karo CPE galoofyada la tuuri karo Boorsada maaskaro caafimaad
Taleefanka gacanta ： +8615221892684
Gacmo gashiyada caaga ah
Gacmo gashi PE
Gacmo gashiyada la dheereeyay ee la tuuray ee PE
TPE galoofisyada la tuuri karo
Gacmo gashiyada la tuuro ee CPE
Bacda boorsada istaag
Bacda is-taageerta ee dareeraha
Bacda kiishka ah ee kartoo loogu talagalay xirmada cuntada
Bacda kiish-kiish taagan-up bireed aluminium midab leh jiinyeer
Bacda shaabad lagu xiro seddex dhinac
Bacda baakadaha wejiga lagu xidho oo saddex dhinac leh
Bacda baakadaha isku qurxinta ee saddax geesoodka ah
Bacda foornada faakiyuumka faakiyuumka ah ee saddexda dhinac ah
Bacda baakadaha faaruqinta ah oo hufan
Bacda shaabad lagu xiro afar dhinac
Bacda baakadaha cuntada ku xirta oo afar geesle ah
Bacda siddeed dhinac
Sideed sideed shandad istaag
Dharka iyo bacda baakadaha qurxinta
Midab duubista filimka duubista
Bacda baakadaha cuntada
Xidhmada Baakadaha Cuntada
Bacda baakadaha shaaha
Sidee loo cabiraa awoodda daboolida kuleylka ee bacaha baakadaha caaga ah?
12 siyaabood oo lagu hagaajiyo cimri dhererka taarikada daabacaadda
Shuruudaha waxqabadka cuntada ee barafaysan ee qalabka baakadaha
Heerka baaritaanka bacda baakadaha cuntada
Farqiga udhaxeeya bacda aluminiumka saafiga ah iyo bacda aluminium
Falanqaynta waxyaabaha ee bacaha baakadaha shaaha
Aqoonta astaamaha bacaha aluminium aluminium
Isbedelka horumarka ee naqshadeynta baakadaha
Hordhac kooban oo ka mid ah kiishka taagan ee biiyaha
Maxay yihiin waxyaabaha ku jira bacda wax lagu rakibo?
Talooyinka WHO ee ku wajahan Shaqaalaha Cuntada inay xirtaan galoofisyada la tuuri karo
Waa maxay farqiga u dhexeeya galoofyada PVC iyo galoofyada PE
Qalab noocee ah ayaa ku fiican bacaha lagu rido qaboojiyaha degdegga ah?
Bacda baakadaha Cuntada hordhaca qaab dhismeedka
Hordhaca baakada shaaha
Telefoonka gacantu: +8615221892684
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Sare ee Shiinaha
Galoofyada la tuuri karo ee PE, galoofyada la tuuro ee TPE, galoofisyada la tuuri karo ee loo yaqaan 'CPE'
Warshad wax soo saarka bacda baakadaha
Bacda wax lagu xiro seddex geesood, Bacda afarta dhinac wax ku shaabadaysa, Istaag bacda kiishka, Sideed bacda wax lagu shaabadeeyo
Shanghai Duxia Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd. waa shirkad casri ah oo ku takhasustay daabacaadda baakadaha dabacsan ee balaastigga ah, oo la aasaasay 2008. Wadarta guud ee warshadda Shanghai: 6000 mitir murabac ah, Warshadda waxaa loogu talagalay inay tahay aqoon isweydaarsi heer 300,000 ah sida ku xusan aqoon isweydaarsiga caadiga ah. Shaqaalaha shirkadda ee jira: in ka badan 65 qof, oo ay weheliyaan koox ka kooban shaqaale sare iyo kuwa farsamo oo dhexdhexaad ah oo ku hawlanaa baakadaha rogrogmi kara sannado badan. Shirkaddu waxay leedahay khadad wax soo saar baako badan oo rogrogmi kara: mashiinnada daabacaadda oo xawaare sare leh, mashiinnada wax lagu nadiifiyo ee aan saliidda lahayn, mashiinnada wax lagu nadiifiyo oo qallalan, mashiinnada kala-baxa xawaaraha sare leh, mashiinnada samaynta bacaha badan ee shaqeynaya iyo qalabka baaritaanka iyo qalabka baaritaanka u dhigma, dhammaantoodna waa heerka gudaha.
Maxaad noo dooratay?
Khibrad qani ku ah wax soo saarka baakadaha
Shanghai Duxia Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd. waa shirkad casri ah oo ku takhasustay daabacaadda baakadaha dabacsan ee balaastigga ah, oo la aasaasay 2008. Wadarta guud ee warshadda Shanghai: 6000 mitir murabac ah, iyo guud ahaan aagga warshaddii Anhui Guangde: 15,000 mitir laba jibbaaran Waxaan inta badan qaadnaa naqshadeynta iyo daabacaadda bacaha baakadaha. Xoog farsamo oo xoog leh, qalab casri ah.
Kooxda iibinta naqshadeeye xirfadle ah
Shirkadeenu waxay leedahay naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah iyo shaqaale iibiya si ay ula xiriiraan macaamiisha oo ay si firfircoon ula socdaan horumarka amar kasta. Bixiso adeegyo la-talin xirfad leh intaadan amar bixin. Inta lagu jiro nidaamka dalabka, naqshadeeyaha iyo maareeyaha iibka ayaa siin doona taageero iyo xaqiijin faahfaahin kasta. iyo kooxdayada ayaa dabagal ku sameyn doonta jawaab celinta macaamilka kadib markay helaan alaabada.
Daabacaadda wanaagsan iyo bacda hubinta tayada
Intii ay haysatay qalabka qalabka, shirkaddu sidoo kale waxaa ka go'an inay hirgeliso nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee SO9001-2008 waxayna leedahay shahaadooyin khuseeya oo ay kujiraan shahaadada baakadaha cuntada ee QS. waxayna siin kartaa macaamiisha ajnabiga ah adeeg hal-joogsi ah sida wax-soo-saarka, caddeynta kastamka iyo rarka.
Gacmo gashiyada PE la tuuro
Bacda maaskaro caafimaad
U dir su'aalahaaga
Gacmo gashiyada dheeraadka ah ee loo yaqaan 'PE'
Bacda isku qurxinta ee seddex geesood ah
Bacda maaskaro caafimaad oo seddex geesood ah xira
Bacda foornada aluminium aluminium xirashada seddex geesood ah
Bacda faakiyuumka oo saddex geesood ah
Bacda kiish-kiish taagan-up aluminium
U istaag bacda biiyaha ee dareereyaasha
U istaag bacda kiishka cuntada
Taleefanka gacanta: 008615221892684
Dhammaan xuquuqda waxaa leh Shirkadda Shanghai Duxia Industry and Trade Co., Ltd.
Dhammaan xuquuqda waxaa leh Shirkadda Shanghai Duxia Industry iyo Trade Co., Ltd.
Aan wada sheekaysanno
Ka tag fariintaada, iibkeenu wuu kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan!